You maara na ị nwere ike weghachite App akwụ ụgwọ? | Gam akporosis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Mgbe anyị na-achọ ngwa nke na-ekpuchi ụdị mkpa ụfọdụ, anyị na-enweta Playlọ Ahịa Play na ọchụchọ ya. Enwere otutu nhọrọ ma di iche na anyị anaghị ahọrọkarị nke kachasị mma. N'ọnọdụ ụfọdụ n'ihi ntakịrị nkọwa na-ezighi ezi nke ngwa ahụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, n'ihi na anyị na-ekwe ka azịza anyị buru anyị. Ọbụna mgbe ụfọdụ, ọ bụ screenshots na-akpali anyị ịzụta ya.
Ma n'ezie, ọ na - eme na ozugbo awụnyere ya abụghị kpọmkwem ihe anyị na - achọ. Naanị mepee ngwa ahụ azụrụ ma gbalịa ịrụ ọrụ iji chọpụta na anyị enweghị mmasị na ya. Ma ọ bụ na ọ naghị ekpuchi mkpa anyị chọrọ. Ma ọ bụ ikekwe nsụgharị Spanish dị oke njọ nke na anyị aghọtachabeghị ihe ọ bụ. Mana gịnị ka anyị ga - eme ma ọ bụrụ na ngwa a ejighi ego?
1 Google ghaghachitere gi ego apughi ighari gi.
2 Anyị nwere ike ịrịọ nkwụghachi n'ime awa abụọ.
Google ghaghachitere gi ego apughi ighari gi.
Ọ bụrụ na nke a emetụla gị, echegbula onwe gị ị nwere ike weghachite azụta gị na-arịọ maka nkwụghachi. Dị ka iwu n'ozuzu, mgbe anyị zụrụ ngwa n'efu ma anyị enweghị mmasị na ya, ọ dị mfe. Anyị wepụrụ ngwa ahụ, ma ọ bụrụ na ahụrụ m gị anaghị m echeta. N'ezie, ọ bụ ihe a na-ahụkarị ibudata ngwa maka ule, na mgbe ụfọdụ ha anaghị adị ihe karịrị nkeji ise na ekwentị anyị.
Dịka ọmụmaatụ, ngwa na-efu anyị euro 1,75, ọ bụghị akụnụba ka anyị ga-efufu site na ịwụnye ya, ọbụlagodi na anyị enweghị mmasị na ya. Mana n'ezie, enwere ngwa ndị dị oke ọnụ karị. Na itinye ngwa nke na-anaghị efe anyị ma ọ bụ na anyị enweghị mmasị, na mgbakwunye na ịmefu anyị ego, anyị achọghị ya. Isi ihe bụ na ọtụtụ ndị ọrụ amaghị na Playlọ Ahịa Google Play na-enye anyị ohere ịmegharị azụmahịa ahụ.
N'adịghị ka Apple, nke dị na ngwa ngwa gị awade oge ikpe rue ụbọchị iri na anọ. Ihe karịrị oge iji mara ma ngwa ebudatara ga-aba uru ma ọ bụ na ọ gaghị. Google na enye anyi oge di nkpumkpu iji weghachi ngwa akwụmụgwọ ebudatara.
Anyị ga-enwe awa abụọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrịọ nloghachi nke ebudatara ịkwụ ụgwọ ngwa. Na usoro a na-eme ngwa ngwa. Site na Storelọ Ahịa Play n'onwe ya, anyị na-achọ ngwa ebudatara. Na otu ebe anyị pịrị ịga n'ihu na nzụta gị ga-apụta «Rịọ nkwụghachi». Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị nwekwara ike ịchọ akaụntụ anyị maka Iwu iwu, ma họrọ ego nkwụghachi na azụ ikpeazụ emere.
Anyị nwere ike ịrịọ nkwụghachi n'ime awa abụọ.
Anyị enwere ike ịnwale ngwa zuru oke n'ime awa abụọ? Ọ bụ ezie na oge nnwale nke ngwa iOS dị ogologo. Ọ bụrụ na ịchọghị ngwa, ọbụlagodi na awa abụọ anyị nwere ike ịnwe ọtụtụ oge. Yabụ, ọ dị anyị oge karịa karịa iji rịọ nkwụghachi maka "ịzụta zụrụ ahịa".
Ma ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị atụfu oge kachasị nke Google kwuru anyị nwere ike ịnwe otu nhọrọ ọzọ. Ọ bụrụ n'ịchọpụta na ngwa ebudatara abụghị ihe ị tụrụ anya ya. Have mefuola ihe ị chere na ị gaghị enweta egwuregwu ahụ a tụrụ anya ya. N'agbanyeghị I nwere ike ịrịọ nloghachi nke gị zụọ.
N'oge a, anyị enwekwaghị nhọrọ iji rịọ maka nkwụghachi. Mana ee anyị nwere ike mepee ihe omume ma kọwaa na ngwa ebudatara adịghị enweta atụmanya anyị. Nhọrọ a anaghịzi adabere na Google. NA Ọ ga-abụ onye nrụpụta ngwa ahụ n'onwe ya ga-ekpebi ma ọ ga-eme nkwụghachi azụ achọrọ.
Eburu ihe niile anyị na-azụta site na Storelọ Ahịa islọ Ahịa nwere ike ịlaghachi. Ọbụna ọdịnaya dijitalụ dị ka egwu ma ọ bụ ihe nkiri. Anyị nwekwara ike ịrịọ nkwụghachi maka ndenye aha. Na nkenke, ihe niile anyị zụtara. Mana iburu n'uche oge Google nyere anyị, ọ bụghị mgbe emechara.
Ya mere ị gaghị echegbu onwe ma ọ bụrụ na ị zụrụ ngwa na-adịghị amasị gị. Ma ọ bụ ọ bụrụ n’amaghị ama iji zụta ihe ị chọghị. Ọ bụrụ na ị na-akwa ụta na App ikpeazụ ị zụrụ. Ma ọ bụ ngwa ịkwụ ụgwọ ị rụnyere adịghị nso, ọbụnadị nso, na ihe ị tụrụ anya ya, ọ nweghị ihe ga-eme. Google weghachite ego nke nzụta gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » You maara na ị nwere ike weghachite App akwụ ụgwọ?
Galaxy S8 ga-amalite site na euro 799